Netflix တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်: ငါခရစ်စမတ်အတွက်အိမ်ဖြစ်လိမ့်မည် - Netflix ရုပ်ရှင်
Netflix မှအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်: ငါခရစ်စမတ်များအတွက်အိမ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်မှုရုပ်ရှင် ၅၀ - Zombeavers သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည် ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix TV Show: F သည်မိသားစုအတွက်ဖြစ်သည်
ငါခရစ်စမတ်အတွက်အိမ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Jonathan Taylor နှင့် Jessica Biel သည်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်ရုပ်ရှင်နှင့် Netflix ရှိခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည်။
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးထွက်နောက်ဆုံးထွက်တွင် ငါခရစ်စမတ်များအတွက်အိမ်ပြန် Be ပါလိမ့်မယ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌ရှိ၏!
ငါခရစ်စမတ်များအတွက်အိမ်ပြန် Be ပါလိမ့်မယ် ဒီရုပ်ရှင်ကို Michael Allin၊ Tom Nursall နှင့် Harris Goldberg တို့ကရေးသားခဲ့ပြီး Arlene Sanford မှရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ငါခရစ်စမတ်ကြယ်ပွင့်ယောနသန်တေလာသောမတ်စ်, ဂျက်စီကာ Biel, အာဒံ LaVorgna, ဂယ်ရီကိုးလ်, Gordဝဂေါ်ဒွန်, Sean O'Bryan နှင့်အင်ဒရူး Lauer များအတွက်နေအိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Jake (Jonathan Taylor Thomas) သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောင်းတွင်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပြီးအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေရှိခရစ်စမတ်အတွက်သူ၏မိသားစုကိုအိမ်ပြန်ရောက်ရန် Santa Santa ဝတ်စုံဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးခရီးသွားရသည်။ ဒါဟာသော်လည်း, သူ့မိသားစုကိုကြည့်ဖို့အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ သူကခရစ္စမတ်အဘို့အိမ်ပြန်စေသည် Jake ရဲ့ဖခင်, Jake အလွန်မကြာခဏမထားဘူးတစ်ခုခုသူ့ကိုကားသစ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
သငျသညျ 90 ခုနှစ်လူငယ်တစ် ဦး သည်ဆိတ်သငယ်ဖြစ်လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းဤရုပ်ရှင်မြင်ရပါတယ်!
ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းရုပ်ရှင်သည် Jonathan Taylor Thomas ရုပ်ရှင်အများစုကဲ့သို့အတော်လေးချိုသာဖွယ်ကောင်းသည်။ တစ် ဦး ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အဘို့, သို့သော်ထိုသို့မဆိုးပါပဲ။ အဆိုပါသတင်းစကားကိုအစိုင်အခဲဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမြင့်မားသောပုံပြင်ပါပဲ။ အဘယ်သူသည်ခရစ်စမတ်အချိန်တွင်ရုပ်ရှင်မျိုးကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်လော
အကယ်၍ ငါခရစ်စမတ်များအတွက်အိမ်ပြန် Be ပါလိမ့်မယ် သင်တို့အဘို့အအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ, Netflix အပေါ်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်နှင့်ခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ကျန်ထွက်စစ်ဆေး!
Netflix မီးခိုးရောင်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 15
သငျသညျ hulu အပေါ်တဖြစ်ကြသည်
အာကာသ netflix တွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်